Ngezikhathi ezithile, umuntu ngamunye unesidingo self-ngcono. Ngokukhethekile, lesi sifiso kubonakala ukuba ngokushesha abaleke ukukhokhela izifundo ezibizayo noma ukungena ubuhlakani ehlonishwayo. Self-kunqunywa, ngaphezu kwakho konke, isidingo sokushintsha into empilweni yakho, engeza imibala entsha ukuze impilo ajwayelekile, ukuthenga fresh, indlela ayinzima ukuba nibone izinto.
Izincwadi, ukushintsha ukwazi, ngokuvamile zenzeka umuntu aphila isikhathi - lapho umuntu ukulungele ukushintsha. Khona-ke lolu hlobo ulwazi kuyinto godsend, umcebo kumfundi. Izincwadi, ingqondo akhula, ingaba yithuluzi elikhulu ekufezeni imigomo yabo. Bazokusiza ukuze uthole ulwazi olusha ezidingekile isiqalo yimpumelelo. Kule nkathi ngakho kubalulekile ukuthola ngesikhathi esifanele ulwazi nobuchwepheshe ulwazi oludingekayo ukuze bakwazi ukuhlaziya ke zihlukanise ebalulekile evela engabalulekile.
Ziyini izincwadi zokufundisa?
Empeleni lanamuhla, incwadi waqala ukuthola kabanzi ukuqeqeshwa umsebenzi kuka ukugqoka kuyajabulisa. Ukufunda baba umsebenzi akuyona nje kwamasiko, kodwa futhi wokufundisa. Futhi lokhu kungaba futhi kufanele sijabule! Uma ngaphambi ncwadi wayengaphezu isithwali kwezifiso zokuziphatha, kodwa manje kunaka elivulela ingxenye ulwazi. Isisusa esikhulu ukuze afunde umkhiqizo othize ngokuvamile iba isidingo ukufunda okuthile, ukufunda. izincwadi Sikhungo ungumholi empumelelweni kuyo yonke imikhakha yokuphila: Psychology, ingcebo, injabulo, siqu iSilekeleli Sokwazisa.
Bafunda ukunqoba ukwesaba, ukungabaza, ukukhathazeka futhi ukhululeke iphokophele umgomo walo. Izincwadi eyashintsha ukwazi, zaba abangane zokuphila. Uma ufunda le ncwadi, ungenawo wasibeka phezu eshalofini, futhi ngeke usibize ngokuphindaphindiwe, kancane kancane ucabangela, lokho ekubiza, lokho ihlose olawula.
Zezinzuzo zokufunda izindaba sokwanda siqu
Amabhuku ukushintsha ingqondo yomuntu, njalo zibonakala umfundi njengoba isambulo, usizo akunakuphikwa. Kudaliwe ukuze ufunde okuthile, ukuphendula imibuzo esemqoka eziphakamayo ikhanda yomfundi. Yingakho abathandi buciko kanye nezincwadi zakudala, izisebenzi kanye ongoti emkhakheni kolimi akufanele sicasulwe yinoma yokuthi kufundwa izincwadi ziya ziba mandla esikhundleni zakudala namuhla. Kufanele kukhunjulwe ukuthi art ekhona ngesikhathi nokubaluleka kwalo ayikwazi shake lutho. Iningi izincwadi ekufanelekelayo ukufundwa, ethulwa kule athikili. Ezinye zazo basonta nezincwadi zakudala, abanye imisebenzi kahle wesimanje. Uma ufunda okungenani ezinye zazo, ungakwazi ukuza ukuqonda endleleni yabo yangempela okufanele ilandelwe lapha futhi manje.
Amazing umsebenzi, olwasungulwa ahlonishwe Master Richard Bach esibayeni. Lena incwadi mayelana nendlela ukuba sihlale sithembekile kwezifiso zakhe, ukulandela iphupho lakhe, ukuze bakwazi kahle ukunquma inhloso kanye esebenzisa Ukuqaphela kwabo. Ngesimo umbhali inganekwane unobtrusively ubonisa izimiso ekufezeni impumelelo ngabanye kanye kubonisa isiqondiso lapho ukuhambisa.
I protagonist - Chayka Dzhonatan - amaphupho izindiza, kuyilapho izihlobo unesithakazelo kuphela indlela ukuzondla. Ubaba wabuye wathi izifundo indodana yakhe "khulula-ukucabanga" futhi into engenamsebenzi. Jonathan uyaqonda ubuciko indiza, hones amakhono ngokusebenzisa ukuqeqeshwa njalo, okuyinto uyahlukunyezwa wokuba kwakhe lonke, kodwa kunalokho ukunikeza umuzwa ojulile wokwaneliseka. Incwadi kuyoba wusizo kulabo abafuna ngokwakho, ikakhulukazi olufanele kubantu abasha uzobe ebhekene ukukhetha professional. Ngokomfanekiso umsebenzi iveza lokho okushiwo yinkulumo onobuqambi o-creative: ulwela for ubuhle, "Flight" iyingxenye ngenxa yomphefumulo wakhe. Kule ncwadi iveza eziningi izinkinga: kanjani ukuqonda ubunjalo umsebenzi bakhe beqiniso, ukuvikela ilungelo abo ukuba baphile ngokuvumelana nemvelo, futhi abe inkosi kweqiniso.
E. futhi J .. Hicks 'Ngokuqinisekile uSara. abangane enezimpiko - kungcono phakade "
Wonderful trilogy abalobi Emva kwempi uEsta no Dzherri Hiks. Incwadi lisifundisa ukuba sibheke izenzakalo zamanje ngokuhlakanipha, ngokuqonda ukuthi zonke isimo okuthile ezindabeni zabo. Sarah - abavamile intombazane ingane, okuyinto lizungezwe othisha esikoleni, abangane, ubunzima elihlobene ne ngokungaqondi yabanye. Ngolunye usuku, usendleleni uya ekhaya uma sekuphume isikole, uSara ihlangabezana Filina Solomona, ngubani ngokushesha iba umngane wakhe omkhulu. Ufundisa namaqhinga ukuphila intombazane, ulandisa indlela zazi wakhe izimpawu imfihlo hhayi ukuthi usephutheni. Umbhali kungabonakali kakhulu kuholela umfundi ukuba aqonde ukuthi akukho ukufa, kukhona ushintsho, noshintsho umphefumulo. Filin uSolomoni uyafa, futhi umphefumulo wakhe uyaqhubeka ukuphila. Le ncwadi ibizwa ebhalwe isitayela lula, ukuze ingane ungaqonda, ukuwuzwa.
Osho "Ukukhula. Umthwalo kube ngokwakho "
Izinkulumo kumbhali mayelana isikhathi, okuyinto manje noma ngokuhamba kwesikhathi kukhona wonke umuntu. Ukufinyelela ebudaleni obuthile kuphela, umuntu Useqala ukucabanga imibuzo ngalokho uhlala ngoba, iyini injongo umsebenzi wakhe, lokuthi wayekwazi ukunikeza emhlabeni. Umuntu ngamunye uhlukile futhi ngamunye wethu ngendlela yakhe. izincwadi ezikhuluma ngenkolo, okuhlanganisa, ngaphandle kokungabaza, futhi lo msebenzi, ukuhola umfundi umsuka siqu yimvelo elingapheli. Emakhasini we ncwadi isitshela indaba ngalokho ngobudoda lwangempela aluyona ezifanayo ngeminyaka nokuhlakanipha incike isifiso sangaphakathi ukuthuthukisa ngokwabo futhi ukulungele ukusizakala.
UVladimir Sinelnikov, "Amandla Inhloso"
Valery Sinelnikov - onguchwepheshe emkhakheni wezokusebenza kwengqondo, homeopathy kanye ngemilingo. Lena master komphefumulo womuntu, ubani ngokusebenzisa izincwadi zakhe obiza abantu abaseduze kwabo ukubona izwe kweqiniso a enomusa, kube abasabelayo, empathic. Ukwenza kweemboniso Dr. Sinelnikov kubonisa ukuthi ukufunda ukuthatha zonke izimo njengesipho ukudalelwa. Ngokusho kwakhe, zonke esimweni esingajabulisi ngempela ezihlobene ezenzweni ezingalungile emhlabeni zangaphandle, ukuze asikwazi ukumethemba, sifuna ukuba uthole kuka emfanele. Le ncwadi, kanye amabhuku kumafilosofi kanye psychology, umema umfundi cabanga ukuqaliswa kanye ukugcwaliseka imfihlo nezinhloso zethu.
Valery Sinelnikov ukuthi amandla ukucabanga namandla izinhloso omkhulu. Kusukela lokho imicabango umuntu okuthunyelwa i-Universe lena incike ikusasa lalo, injabulo nengcebo. Ngaphezu kwalokho, elaborates ku ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba ujabule umuntu umqondo ka kunembeza omhlophe kanye nengqondo ezolile. Kuphela ubumsulwa imicabango - isiqinisekiso sokuthi umuntu uyofinyelela Imiphumela elindelekile.
Liz Burbo "Umzimba wakho uthi: Love ngokwakho"
Amabhuku ukushintsha ingqondo, qiniseka afunda ukuhlonipha abantu bazo ungubani yabo. Futhi 'ungahlala kanjani indiva impilo yakho? The Book of Liz Burbo ekutshela ngemvelaphi isifo: lapho kwenzeka futhi kungaholela nemiphumela. Kuyini isifo esingalapheki, ngaphambi kwalokho imithi akanamandla? Medicine - kuyinto okusunguliwe enkulu yomuntu iyaqhubeka yokuthola izinto ezimangalisayo engqondweni yakhe. Izimpawu yezifo ezihlukahlukene zibhekwa njengemikhiqizo nombhali Ukuxazulula amasignali ne essence yabo kwangaphakathi. Lapho kungekho isivumelwano umphefumulo, akunakwenzeka ukuba siphile ngokuvumelana umhlaba wonke. Incwadi kuveza izindlela kohlelo, ngawo ungakwazi ukunqoba noma isiphi isifo futhi yokuthuthukisa ubuhlobo bethu wena kubantu ababezizungezile. Incwadi kungaba futhi uhlu oluphelele izifo ezahlukene lemikhuhlane, funda mayelana nezimbangela zabo futhi ukuthola izindlela lapho ukushintsha ingqondo yakho ibe ngcono.
Zinkevich-Yevstigneyeva "Awakening ubufazi"
Izincwadi ku-ifilosofi ngempela kumele kulekelelwa Omunye umagazini enkulu. Umbhali usebenzisa indlela skazkoterapii sibonisa indlela okubaluleke owesifazane abe nowesifazane ukwenza ngokuhambisana nesimo sawo.
Incwadi echaza izivivinyo ezithakazelisayo ukuthi Ungenza ngokwakho ekhaya, wethule incazelo edumile Russian Folk yezinganekwane, kuyofikwa uxhumano yabo ne ngokoqobo nsuku zonke zokuphila kwethu.
Kiyosaki sika "Rich Dad Kubi Ubaba"
Kuhle izincwadi, ukushintsha ukwazi, njalo igxile umfundi abahlakaniphileko esifisa kwawena. Umsebenzi wobuciko Kiyosaki sibhekiswe labo abafundi abafuna ukufeza zezimali inhlalakahle. Umbhali lucwaningo incazelo ukuqhathanisa phakathi kwemibono emibili yezwe: abacebile empofu. imibono yabo ngokuvamile kungqubuzane. Lesi sicebi akesabi ukuba izifake engozini, libhekisela imali njengoba ithuluzi bafinyelele imigomo yabo. Ompofu esaba ukuthi uyolahlekelwa imali, ugcine yonke into, kuvimbela uqobo nje kuphela ukulondoloza dolobha (uma kuvela ezandleni zakhe). Ngakho, indoda ecebile esandisa umcebo wakhe, futhi abampofu ilahlekelwa nakakhulu. Umbhali ophethe umqondo wokuthi umuntu kufanele inamithiselwe imali, akudingeki ukuba bakhulekele, esho ukuthi ubunikazi ngezezimali kuqinisekisa ukuzimela komuntu nenhlalakahle.
Izincwadi, ingqondo akhula, njalo usishukumisele ukuba ukukhula siqu. Kiyosaki igcizelela ukuthi ulwazi lokuthi aphathwa kanjani imali, kubalulekile ukuba badlulisele izingane kanye nazo zonke izinhlobo zesayensi. Ukuze sikwazi ukwakha umbono omuhle ngekusasa labo, kubalulekile ukwazi ukuthi imali kungaphansi imithetho ukugeleza ukuchuma bakwazi ukusamukela.
Leli bhuku ekukhanyeni elihle. Kuyoba sobala ngisho ezinganeni ezincane, ngoba energy oqondile. The Little Prince enakekela iplanethi yakhe, nokuvuka ekuseni, ngokushesha kuletha emuva ukuze. Ngokomfanekiso, lo mbono zingachazwa kanje: kubalulekile ukugcina isimo sengqondo sesimweni esihle, ukuze silondoloze wokuzwana izwe lakho siqu.
"Dandelion Wine" R. Bradbury sika
Yeka ukuthi kubaluleke kangakanani ngawe ezinye izikhathi zokuphila kwakho? Ngezinye izikhathi ngiba nomuzwa like ngokubeka kubhasikidi ekhethekile noma usungula 'ibhokisi izinkumbulo. " Uhlamvu eziyinhloko zomsebenzi futhi uya - yena unawo ngokwengqondo memory of the ngamaholidi ukuze uzokwazi mifanekiso (lapho kuyofika yamakhaza ekwindla kusihlwa). A ukutholakala ezinkulu, okwenza umfana Douglas - "Ngiyaphila." Yena ngentshiseko ngize kule ukuqonda futhi ecabanga ukuthi bayazi ngakho, uyise nomfowabo.
Kuhle izincwadi kuwo, akungabazeki, zihlanganisa "Dandelion Wine" ahambisana nomuzwa okuhle, ukungafi, ukubaluleka bathi ukuphila njengoba ebaluleke kakhulu nobuhle.
SG Kara-Murza "Izikhundla ukwazi"
Incwadi wethula amasu eziyisisekelo ithonya okunawo ukuze bakwazi esikhathini esizayo ukuphatha ngempumelelo isikhathi nemali yakho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi azinakwenzeka ukuze akhohlise, ukuthi zonke tricks futhi manipulations baye eside kwaziwa. Incwadi "Izikhundla ukwazi" kuzovumela ukuba bajwayelane ububanzi elaziwayo elincane ebanzi abantu izindlela namaqhinga ukuthonya abantu. Mhlawumbe abaningi abaqapheli ukuthi anamandla kangakanani ingalo kuyinto abezindaba, ezombusazwe, izikhungo zomphakathi.
Kungani ngidinga ukufunda lezi zincwadi?
Izincwadi, ukushintsha ukwazi, nomphumela ozuzisayo on ukuthuthukisa sphere bokusungula indoda, ekwakhekeni ubuntu avuthiwe, mbaxa umthwalo izinqumo. Ngaphezu kwalokho, beba nomuzwa lokuzethemba, funda ukuqonda ubudlelwano imbangela nemphumela we izenzakalo ezihlukahlukene futhi khumbula amagugu okuphakade. Kulesi sihloko, sibuyekeze izincwadi 10 eyashintsha ingqondo nokusiza ukuthatha bahlole izinto ajwayelekile kanye izenzakalo.
Ngakho, abafundi abafuna self-ukuthuthukiswa, ngifuna ukuncoma ukufunda lezo imisebenzi zivuse kokuthinteka inhliziyo ngigeza, vumela ukuba bafunde izinto ezintsha, ukuthola izimpendulo zemibuzo ngobuntu yangaphakathi. Amabhuku izingqondo, ukuze lisize futhi sikhethe kahle ezihlukahlukene ezimweni ezinzima.
I Duel nezikulu kokufa Pushkin
"UPetru" - inoveli mayelana usesimweni esibucayi emphilweni Russia
Ikhekhe lephepha ngezifiso - ukwengeza okungavamile kumagama anomusa
Anime Bleach: ukuqhubeka kungenzeka?